Kuyethusa ... $ 8.8 Billion Kuzosetshenziswa I-Halloween kulo nyaka | Martech Zone
Kusobala impela ukuthi kumikhiqizo nabakhangisi ababhekise kuma-Halloween endabuko, ukusebenzisa i-Pinterest ne-Facebook ukufinyelela lelo nani labantu abadala kuzokuzuzisa. Ngokuqhathanisa, i-Instagram, i-Snapchat, ne-TikTok yizona zingxenyekazi ezihamba phambili zezimpawu “zesipiliyoni” - ikakhulukazi uma unikeza okuhehayo kulo nyaka - nabathengisi ukufinyelela lelo qembu elincane leqembu le-Halloween.
Ishalofu, i-Halloween Ngezinombolo
Izibalo ze-Halloween Ziphezulu Futhi Ziphansi
I-Candy iseyinto ethandwa kakhulu ukuyithenga nge-Halloween njengoba ama-95% wababungazi bezicoshela usuku olukhulu.
Up - U-72% wababungazi bahlobisa ikhaya labo.
Up - abagubhi abavakashela izindlu ezihlaselwa abantu bagxume basuka kumaphesenti ayi-18 baya kumaphesenti angama-22 kulo nyaka.
Down - Bambalwa abantu abahlela ukusebenzisa imali ngezingubo, namakhadi okubingelela.
Ukuziphatha kwe-Halloween nesizukulwane Z
Olunye lwamasethi wedatha athakazelisa kakhulu iShelf elidonselwe i-infographic yabo likhombisa umehluko wokuthi kanjani UGen Zers abaneminyaka ephakathi kwengu-18 nengama-24 bagubha iHalloween uma kuqhathaniswa nabantu abaningi.
Abantu abadala bakwaGen Z mancane kakhulu amathuba okuthi bahlale ekhaya futhi badlulise uswidi kunomlingisi ojwayelekile we-Halloween (ama-56% kaGen Zers azokwenza ngokuqhathaniswa nama-66% ama-Halloweeners jikelele).
Kodwa-ke, abantu abadala bakwaGen Z maningi amathuba okuthi bagqoke imvunulo (73% uma kuqhathaniswa no-47%).
Abantu abadala bakwaGen Z kungenzeka bavakashele indlu ethwele abantu (40% kuqhathaniswa nama-22%),
Abantu abadala bakwaGen Z nabo banamathuba amaningi okuthi bahambele noma benze umcimbi (ama-53% uma kuqhathaniswa nama-32%).
Tags: Halloweenukuthenga i-halloweenICSCUmkhandlu Wamazwe Omhlaba Wezikhungo ZokuthengaPinterestimihlahlandlela yomkhiqizoukubekwa komkhiqizoi-retargetingsocial mediaokuqukethwe okwenziwe umsebenzisiNgifikileyoutube